Maxaa loo kala diray guddiga maaliyadda ee golaha shacabka? - BBC News Somali
Maxaa loo kala diray guddiga maaliyadda ee golaha shacabka?
Image caption Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka, Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey
Guddoonka golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa kala diray guddiyo dhowr ah oo ay kamid yihiin guddiga miisaaniyada iyo maalliyadda. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska guddoonka golaha shacabka ayaa lagu sheegay inay caddaatay xadgudbyo la sheegay in lagu sameeyay xeer hoosaadka barlamaanka, khilaaf na soo kala dhex-galay guddoonka iyo xubnaha guddigaasi.
Warqdan oo uu ku saxiixnaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka, Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey ayaa waxaa uu ku xusan in uu go'aankan uu kala tashaday guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku xigeenka labaad.
Golaha Shacabka Soomaaliya oo gudoomiye dooranaya
Xildhibaan Cabdullaahi oo la hadlay BBC-da ayaa waxaa uu sheegay in xitaa haddii guddoonka golaha ay isku raacaan ay tahay mid aan waafaqsaneyn dastuurka.
''Waan arkay warqadda ka soo baxday xafiiska guddoonka golaha shacabka, waxaana kuu xaqiijinaya inay tahay sharci darro, sababta aan sidaa u leeyahay waxay tahay way caddahay, wayna qorantahay siyaabaha uu guddi ku sameysmi karo iyo siyaabaha uu xubin kamid ah guddiga ay xubinnimadeeda ku waayi karto ama guddoonka uu guddiga ku waayi karo in uu guddon kasii ahaado, waana arrin sharci darro ah''. Waxaa sidaasi BBC u sheegay xildhibaan Cabdullaahi.